निवर्तमान (Nibartaman) ||: बाबुराम चर्चा...
अहिले बुटवलमा बाबुराम भट्टराईको चर्चा बढेको छ । यस क्ष्ँेत्रबाट एकीकृत माओवादीले बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएपछि कुनै अमुक दलले ‘बाबुरामलाई गोर्खा फर्क’ भन्दै चुनावी अभियान छेंडेको छ । दलहरुले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई चुनावमा जिताउनको लागि प्रयास गर्नु र त्यसको लागि प्रचारप्रसार गर्नु नौलो कुरा होइन । र, त्यसमा अरु पार्टीहरुको आपत्ति हुनुपनि पर्दैन । तर, यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका बाबुराम भट्टराईलाई ‘फिरन्ते जोगी’लाई झैं बुटवल छाडेर गोर्खा जान भन्नु त्यो कस्तो प्रचारवाजी हो ? एउटा नेपाली नागरिकलाई देशको कुनैपनि भागमा अस्थायी तथा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने, बसाईंसराई गर्ने, हिंडडुल गर्ने, पेशा व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । त्यसैगरी देशको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ भने बाबुरामलाई गोर्खा फर्क भन्नुको तात्पर्य के हो ?
यदि त्यसो भन्ने नै हो भने त जो जहा“ बसेका छन्, ती सबैलाई आफ्नो जिल्ला फर्कि भन्नुप¥यो । यदि त्यसो गर्दा अहिले विशेषगरी सहरबजार र तराईतिर केन्द्रित भएका नेताहरु सबै आ–आफ्नो जिल्लातिर जानुप¥यो । अनि विस्तारै व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरु पनि फर्किनु प¥यो । के हामीले बनाउन खोजेको नया“ नेपाल त्यस्तै हो ?
विस्तृत आलेख दसैंपछिको समयान्तर स्तम्भमा ........